I-villa enomtsalane kumbindi weSarpsborg, i-60 min ukuya e-Oslo
I-villa enomtsalane ebekwe kumbindi weSarpsborg. I-200 m ukuya kwisikhululo sikaloliwe, i-150 m ukuya kwisikhululo sebhasi kunye nemizuzu emi-3 ukuhamba ukuya kwivenkile, iivenkile zokutyela, ii-pubs, njl.njl. Imizuzu eyi-15 uhamba ukuya echibini elihle laseTunevannet kunye nemizuzu engama-20 ukuya elwandle. Le villa ineminyaka eli-100 ubudala inayo yonke into onokuyidinga, inekhitshi elikhulu elivulekileyo kunye negumbi lokuhlala elibanzi. Indawo enkulu yabucala yangaphandle enefenitshala yegadi kunye nekhapoti ephindwe kabini.
3 amagumbi okulala abucala kunye neebhedi ezongezelelweyo ezinokwenzeka.
Le villa inamagumbi okulala amabini amakhulu aneebhedi ezimbini kunye nencinci enebhedi ezimbini. Ukuba kuyimfuneko, unokwanela ngokulula ezinye iibhedi ezi-2 kwigumbi lokulala elikhulu, kunye nezinye ezi-2 kwigumbi lokudlala labantwana elikumgangatho ofanayo. (Kuya kufuneka uhambe kwigumbi lokudlala labantwana ukuze ufike kumagumbi okulala 1 no-3.)
Isixeko sembali saseSarpsborg sabhiyozela iminyaka eyi-1000 ngo-2016. Umbindi wesixeko ukubonelela ngepaki entle yaseKulås, indawo yabahambi ngeenyawo enomtsalane enevenkile kunye neendawo zokutyela ezininzi. Imall ekufutshane ikwisiphelo sendawo yabahambi ngeenyawo nakwisakhiwo esinye nesikhululo sebhasi. Ngemini entle yasehlotyeni, abantu balapha bathanda ukuchitha imini echibini laseTunevannet.
Ndiza kukwamkela ekufikeni kwakho kwaye ndikukhokele kwizinto ezisebenzayo ekufuneka uzazi. Phofu ndizakufowuna qha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sarpsborg